Oompompi Bokujula Ekhishini Badonsela phansi I-Nickel Ebhulashiwe
Ikhaya / Ikhishi Faucets / Donsela phansi Izicucu / WOWOW Ekhishini Osinki Abasebenza Ngompompi Ukudonsela phansi I-Nickel Ebhulashiwe
I-Wowow Kitchen Sink Faucets Donsela phansi I-Nickel Br Broned
Kulinganiselwe ngo- 5.00 Ngaphandle kwe-5 okusekelwe 40 izilinganiso ikhasimende
(40 Izibuyekezo ikhasimende)
I-single hole ekhishini isikulufu esikhulu se-arc sinezinzuzo ezilandelayo: ukujikeleza kwe-360-degree, ukuhlanza okuguqukayo ngaphandle kwama-engeli afile kuzo zonke izinkomba;
Amanzi alunge kakhudlwana, futhi amanzi ashisayo nabandayo angashintshwa ngokukhululeka;
Ungalawula izinga lokushisa ngentando. Insimbi engenasici yensimbi engenasici, okulula ukuyifaka, okushisa okuphezulu nokumelana nengcindezi, anti-ukuguga.
Iziqondiso zokufakwa kwe-2310700
I-Ktchen thepha ngesikhiphi sokukhipha i-2310700
Yini enye yezinto ezibaluleke kakhulu ekhishini lakho? Abaningi bangaphendula kampompi wasekhishini njengoba le nto isetshenziswa kaningi ngosuku. Ngaphandle kwalokho, ompompi basekhishini bavame ukubhekwa njengezindawo zokugcina eziphambili ekhishini. Akunandaba noma isitayela sekhishi lakho. Ngesizathu esithile ukunakwa kwawo wonke umuntu kubanjwa ngokwemvelo ngompompi wasekhishini. Isizathu esithe xaxa sokukhetha empompini esifanele ekhishini ngomklamo wakho omusha wasekhishini. Ukukhetha okungalungile kungathatha konke ukulingana ekwakhiweni kwekhishi lakho, noma ungakhetha kampompi wasekhishini ongahambisani nokukhethayo okulindele ngokusebenza. Ekugcineni, ikhwalithi nakanjani ayihlali inganakwa. Umuntu angabona kalula ukuthi iyini empompini ekhishini lekhwalithi nokuthi iyiphi engeyona.
Kepha ulibona kanjani ikhwalithi? Kufanele usebenzise kampompi wasekhishini iminyaka ukuze ukwazi ukwahlulela uma ikhwalithi yompompi wasekhishini ingaphezulu kwesilinganiso noma cha. Ungakubona kalula lokhu nge sikhathi iwaranti ikhiqiza umakhi wompompi wasekhishini. Umhlinzeki onikeza iwaranti yonyaka o-1 angalindela izinkinga ezithile ngemuva kweminyaka embalwa. Ngakho-ke akafuni ukunikela isikhathi eside sesiqinisekiso ukuze asindise izindleko. Ngakolunye uhlangothi, umphakeli wasekhishini wasekhishini onikeza a
Isikhathi sewaranti yeminyaka engu-5, wethemba umkhiqizo wayo futhi nakanjani ufuna ukuthatha umthwalo wayo wokusebenza kwayo kuyo yonke leyo minyaka. Abantu bangabuza, kungani kungenzeki iwaranti yeminyaka eyi-10? Yebo, ukusebenza kwempompi yasekhishini kubuye kusetshenziswe kukho, ukugcinwa kwayo kanye nekhwalithi yamanzi. Amompompi wasekhishini angahlala kalula ngaphezu kweminyaka eyi-10, kepha ukulondolozwa okuhle nokulawulwa kwamanzi kungcono ukuqinisekisa isiqiniseko sokuphila isikhathi eside.
Khipha empompini ekhishini lokufafaza
Abantu abaningi bakhetha empompini wokukhipha isifutho ekhishini ngaphezu kwanoma iyiphi enye kampompi yasekhishini. Isizathu esiyinhloko ukuthi ungafinyelela ngempela noma yiliphi iphuzu phakathi noma eliseduze nekhishi lakho. Ngale ndlela, ukuhlanza ikhishi lakho kungenzeki kalula ngenye kampompi yasekhishini. Nge-hose yamanzi unganweba kalula ukufinyelela kwakho ngamasentimitha angama-32 ohlangothini ngalunye. Ngompompi ojwayelekile wasekhishini awusoze wafika kuleli banga, ngakho-ke kungangcono kakhulu ukuhlanzeka. Ngale kampompi wokukhipha okhishi ongeke uphume uyohlanza ikhishi lakho ngombala weso.
Inzuzo enkulu yendawo yokudonsa ekhishini ehlanganisiwe yukuthi ibukeka kahle futhi awuboni ukuthi uyakwazi ukuthola i-hose yamanzi ecishe ibe yi-4'11 ”. Lokhu kukhipha empompini ekhishini lokufafaza le-WOWOW kubukeka nje njengompompi wasekhishini ojwayelekile. Noma ubheka eduze, ngeke uwubone umehluko kusuka empompini ekhishini elijwayelekile. Kepha lapho udonsa ikhanda lokufafaza la ukhipha ithiphu ekhishini lokufafaza, uvele uqaphele ukuthi unethoni lamanzi elikwazi ukubuyisa ezandleni zakho. Futhi uzomangaza ubude bawo! Ngemuva kokusebenzisa i-hose yamanzi, ibuyela esimweni sayo sokuqala, njengokuthi akwenzekanga. Lokhu kusebenza okubushelelezi okubuyisa amandla nge-hose yayo eguquguqukayo yamanzi ne-counterweight kwadalwa ngendlela emangalisayo, uzophawula ngasikhathi sinye.
Thepha ekhishini lokulungisa ngesifutho sokukhipha
Ngubani othanda ukulondolozwa isikulufu ekhishini? Akekho umuntu esingamqagela. Isondlo nokho sizwakala simbi kakhulu kunalokho esiyikho empeleni. Ngompompi wasekhishini, ukulungiswa okubaluleke kakhulu okufanele ukwenze ukuyigeza kahle. Vele umuntu kufanele asuse ukungcola ngemuva kokupheka empompini ekhishini. Ngale ndlela ugcina ukupheka kwekhishi lasekhishini kuyinto kahle. Njengalesi faucet yakho yasekhishini iyaqhubeka ikhanye kungathi yayisintsha sha. Ngaphandle kwalokho, kubalulekile ukususa yonke insalela yamanzi anzima ekhanda lekhompiyutha yokufafaza ekhishini. Ikakhulu uma uhlala endaweni enamanzi anzima kunokujwayelekile. Lokhu ngokuyisisekelo kusho ukuthi amanzi aqukethe chalk eminingi. Lokhu kushiya ezinye izinsalela empompini ekhishini ngemuva kokusetshenziswa ngakunye. Lokho akuyona inkinga nhlobo, inqobo nje uma ukugeza lokhu njalo.
Uma ungakwenzi, ushoko uzokwakha njalo futhi ekugcineni ngeke kube lula ukukususa. Lokhu kungathonya ukusebenza kwama-valves, ama-levers nokufafaza kompompi wasekhishini. Ikakhulu uma unompompi wasekhishini wokukhipha, ungahle uthande ukuhlanza ikhishi lakho lasekhishini ngokujulile ngezikhathi ezithile. Lokhu kwenza isiqiniseko sokuthi yonke insalela isuswa kalula nangokufanelekile ukuze kuqinisekiswe ukusebenza okude kokuphila kwakho konke empompini yakho yokuphonsa ekhishini.
Ukusebenza kukhipha empompini ekhishini lokufafaza
Ngaphandle kokusebenza, lokhu kukhipha isipompo ekhishini lokufafaza kuklanyelwe kahle. Ijamo le-arc ephezulu likunikeza ubuciko kanye nesikhala esisebenzayo ngasikhathi sinye. Ukuqedwa kwe-nickel okuhlanganisiwe kunika lokhu kukhipha isipompo ekhishini lokuphonsa isitayela esimangalisayo futhi. Kungalunga kunoma yisiphi isitolo sokudla noma ehhotela, kodwa ekhishini lakho kungakunika lokho kukhuphula obekufuna.
Mayelana nokusebenza, lokhu kukhipha isipompo ekhishini lokufafaza kunemisebenzi emithathu yamanzi ukukunikeza induduzo oyifunayo lapho ugeza ikhishi lakho. Ungamisa futhi umfudlana wamanzi ngenkinobho ekhethekile ekhanda lesifutho. Ngale ndlela awudingi ukuthinta i-lever lapho ufuna ukubamba amanzi umzuzwana. I-lever ingenziwa ngesandla esisodwa ukuze kulungiswe izinga lokushisa lamanzi nokucindezela kwamanzi. Ngomsebenzi wokujikeleza wama-degrees angu-360 kampompi wasekhishini ungafinyelela ngempela zonke izindawo.
Iwaranti ikhipha empompini ekhishini lokufafaza
Le mpompi ekhishini yokuphetha ephezulu yenziwa ngezinto ezisezingeni eliphezulu zethusi. Ngakho-ke i-WOWOW iyathemba ukukunikeza isikhathi seminyaka eyi-5 nesiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-90. Ukuqiniseka kwethu kufanele kukwenze ukwethembise ngenani lemali esikunikeza lona ngaleli khompompi lekhishini lokufafaza.
Izinzuzo zompompi wasekhishini ngokukhipha isifutho ngamafuphi:
 Unika i-wow-factor kunoma iyiphi ikhishi
 Ukufinyelela okubanzi ngenxa yesifutho sokukhipha
 Idizayini enhle nenobuningi
 Imisebenzi emithathu elula yamanzi
 Ubuchwepheshe obubuyela emuva obusezingeni eliphezulu
SKU: 2310700 Categories: Ikhishi Faucets, Donsela phansi Izicucu Tags: Khipha, Isandla esisodwa, fafaza
1x WOWOW Ikhishi ompompi (50cm Hot & Cold Water hoses, 1.5m High Temperature Pressure Resistant PEX Hose), Izesekeli: Irabha, I-Gasket, I-Nut, i-1x Manual Manual, i-1x Isisindo, i-1x 8 inch Deck Plate
Ngimangele ngenjabulo ngalo mkhiqizo. Ngikholwa ukuthi lokhu kwenziwa ngeChina, kepha ngangiphakathi kompompi ompompi basekhishini. Ngiphinde ngafaka igama lepompo lomkhiqizo ngelinye igama ompompi bomkhiqizo futhi bekufanele ngishintshe isibambo kungakapheli iminyaka emibili ngenxa yokuqedwa kokuqeda. Kungakapheli unyaka, isibambo saphinda saphinda. Esikhundleni sokuchitha imali ephindwe kane kunaleyo engiyenzele le ompompi, bengicabanga ukuthi ngizokuthenga lokhu okwamanje. Bengifuna isikhathi esithe xaxa sokucwaninga, kepha ngidinga umpompi osebenzayo. Lapho ifika, ngamangala ngekhwalithi yokwakha, ngoba yayingaphansi kwekhwalithi yokwakha esegameni lami lomkhiqizo. Izingxenye bezijwayelekile impela, kepha angicabangi ukuthi ukuthenga ezinye izingxenye kuyindlela. Lokho kushiwo, ngale ntengo, ngicabange ukuthi lokhu kuyindlela elahlwayo lapho iphuka. Uma kungangithatha unyaka, ngingajabula. Kuze kube manje, kuhle kakhulu. Isebenze ngokungenaphutha futhi ukufakwa kuhle kakhulu / kulula kunoma yimuphi umuntu osebenzisekayo. Ukufakwa kungithathe cishe ihora, kepha isikhathi esiningi esichithwe bekuhlanzwa ngaphandle kosinki nokususa ompompi wakudala. Ngibe nalokhu cishe izinyanga ezimbili futhi isifutho samanzi silungile kuyo yomibili imisebenzi. Ngoba leli yikhanda elikhishwayo, ngiphinde ngangeza isisindo esingeziwe ku-hose ukuqinisekisa ukubekwa okufanele lapho ngikubuyisela engalweni yombhobho. Lokho kuba usizo, isisindo sivikeleke kahle, singcono kakhulu kunompompi wami wangaphambilini obulokhu ushibilika. Lokhu kubalulekile ngoba ikhanda lespayer alinaso isifutho semagnethi futhi isisindo yiso esivikelayo. Kukonke, ngijabule ngekhwalithi yokwakha, izimonyo, nezici zaleli phuzu lentengo. Leli inani elikhulu. Ngingancoma.
Ngisanda kufaka esikhundleni sepayipi likaMoen ($ 260) elithuthukisiwe lomakhi wami ngompompi we-WOWOW Ikhishi Eliphethe I-Single Handle Kitchen Sink ne-Pull Down Sprayer ku-Brushed Nickel Commercial. Yize iMoen yayintsha (indlu entsha) kwakukubi ukuyisebenzisa.
Le ompompi yeWOWOW yinhle, ibushelelezi futhi kulula ukuyisebenzisa. I-WOWOW iyunithi eyenziwe kangcono kakhulu kune-Moen futhi ngentengo yokuncintisana impela. Ukufakwa kuphephe kakhulu futhi akuveli.
Ngemuva kokuchitha izinyanga ezi-4 ngilwa ukuthola ukushisa nokugeleza ngendlela engiyithandayo ngaso sonke isikhathi lapho ngisebenzisa usinki wasekhishini, empeleni ngimamatheka ngokuthi kulula kanjani ukusetha izinga lokushisa lamanzi futhi ligeleze kahle ngesibambo esibushelelezi nesiqondile.
Isifutho sokudonsela phansi sisebenza njengentelezi bese sibuyela entanyeni ye-swan ngaphandle kokuthi siyisunduzele ekhaya,
IZINKANYEZI EZINHLANU ZONKE ZONKE
I-Wowow Faucet yafika ngokushesha futhi yahlanganiswa ngokuphepha ukuze kungabikho lutho oluklwebhekiwe noma oludwetshiwe. Umpompi muhle! Yesimanje futhi iqinile. Ikhwalithi enhle nenani elikhulu. Ukufakwa kwakulula futhi ipayipi elinemigodi emi-3 lilingana kahle ngaphezu kosinki wethu wakudala. Le ompompi isinika umfutho wamanzi onamandla kakhulu. Ngiyayithanda nje! Ngizothenga ompompi abengeziwe bamakamelo ethu okugeza futhi ngizobheka le nkampani kuqala njengoba nayo ihlinzeka ngamakhasimende amahle kakhulu.
Esethu esidala besisincane kakhulu futhi besingahambi kahle. Lompompi wasekhishini uyayibulala. Ngithole ukuthi le ompompi ibishibhile kuneminye imikhiqizo eyaziwa kakhulu. Umpompi weza nepakethe ephelele ngokuphelele nemiyalo .Ukufakwa kwakulula futhi udinga ukukwenza ngesineke kakhulu. Inhloko yesifutho ibanjwe isisindo esifakwe ngaphansi kosinki. Umfutho wamanzi uzinzile futhi ubushelelezi. Kulula ukulawula. Yinde. Leyo yingxenye esiyithandayo. Kulula kakhulu ukugeza yonke into.
Ngineminyaka engama-64 futhi ngihlinzwe izintamo ezi-2 ngakho-ke ukuba ngaphansi kwekhabethe kwakuwumsebenzi onzima kimi kepha njengowayenguMarine angikaze ngiyeke! Beka okuningi ngangokunokwenzeka ndawonye ngaphambi kokufaka! Leyo yindlela ehlakaniphile!
Khipha enye bese uqala ukuhlanza phezulu kwendawo yokucwila bese uya emsebenzini!
UMA ungeyena umuntu omuhle wokulungisa, osebenza ngesandla, ngoba uswele iziyalezo ezinhle, ngiphakamisa iPlummer uma kungenjalo ungakwenza.
It is a ompompi enhle futhi emangalisayo! Umkami uyayithanda njengami. Enye ompompi basekhishini yathatha iminyaka eyi-6 kuphela! Ngiyethemba ukuthi le ihlala isikhathi eside, isikhathi eside kakhulu njengoba yakhiwe kangcono kakhulu!
Lokhu kudonsa phansi ompompi basekhishini kwenza ibha yethu yaphansi yewayini ibha ibukeke yesimanje. Umpompi kulula ukuwufaka. Ngithanda ukuzungezisa kwayo okungama-degree angama-360 engikwazi ukukudonsa ukugeza ikona ngalinye likasinki. Futhi, ukusebenza kwesibambo esisodwa kwenza impilo yami ibe lula. Ngiyakwazi ukulungisa ukushisa kwamanzi kahle. Ngenani engilikhokhile, le ompompi iyakufanelekela.
Le ompompi ifakiwe isikhathi esingangenyanga endlini yami manje futhi ibingukuthuthuka okuhle kakhulu ekhishini lethu. Ukufaka kwakungelula njengoba bekufanele kube njalo kusukela amapayipi anamathiselwe amafushane kakhulu- bekufanele ngithole amapayipi nokunamathiselwe okungeziwe ukuze ngifinyelele amapayipi
Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu sisezingeni elihle, sisindayo, sinzima, sinenkomishi ngaphakathi (okungenani engikubonayo), ipayipi elide nelithambile. Sizobona ukuthi kuzohlala isikhathi esingakanani. Sizobuya ngizobuyekeza ukuphawula kwami ​​uma kukhona inkinga.
Ngithola ukuthi balayishe ividiyo yokufaka muva nje, okucacile impela. KUFANELE uyibuke ngaphambi kokufakwa.
Icebo lami: Awudingi ukufaka ngesibambo eceleni. Empeleni ngincamela futhi ngifaka nesibambo ngaphambili, akukho nkinga okwamanje. Ngicele umuntu ongisizayo ukufaka. Ukufakwa empeleni kulula kakhulu. Kepha inkinga yami ukuthi anginazo izinsimbi zokwehlisa umpompi wokuqala, owagqwala kabi.
Ngihlabeke umxhwele kakhulu ngompompi wami omusha! Ngangazi nje ukuthi bangaphansi kwe- $ 130 kunamagama aziwa kahle amagama ngakho-ke bekufanele ngizame. Ukufakwa kwakulula futhi asikho isidingo sokubiza i-professional.itompu isebenza kahle kakhulu. Ngama- $ 70 empeleni akukho okuningi ongakhala ngakho.
Ngikhokhe njengo- $ 80? Ngibonile ompompi abafanayo be- $ 120 nokuningi. Ngichithe nehora ngilikhipha elidala, kepha lokhu kungene ngemizuzu eyi-10 noma kunjalo. Imiyalo ibingacacile, kepha ngishintshe okungaphezulu kokumbalwa futhi angikudingi. Ukulethwa okusheshayo, isisindo esihle, kubonakala kumnandi!
Ngayisebenzisa ukufaka umpompi wami wasekhishini. Ukufakwa kwakulula. Isibambo esisodwa singacisha amanzi kunoma yisiphi isikhundla noma ngabe kushisa noma kubanda njengokuphikisana nompompi wakudala, owenziwe yiDelta, lapho amanzi acinywa khona ngesibambo kuphela endaweni ye-canter. Ungakhetha isifutho noma iqonde nenkinobho yokumisa isikhashana. Ungasusa i-spout noma yikuphi kusinki okwenza kube lula ukuyihlanza.
Ngokucabanga ukuthi lokhu kungumkhiqizo obalulekile. Yenziwe nge-nickel ebhulashiwe, into efana nensimbi engagqwali. Into eyodwa engiyithandayo ngompompi ukuthi kukhona ipayipi elandisiwe ongalihudulela phansi ngenhloso yokusebenzisa okuningi. Isibambo sinethezekile. Izinto ezinhle ezisetshenziswe kuthubhu.
Ngikufake lokhu izinyanga ezimbalwa manje futhi kusebenza ngokumangazayo. Bafaka kwakulula kakhulu. Ngibe nesikhathi esinzima ukususa esidala. Lesi safakwa ngemizuzu futhi besisebenza kahle kakhulu kusukela lapho.
Ngihlabeke umxhwele kakhulu ngompompi wami omusha! Ukufakwa kwakulula futhi asikho isidingo sokubiza uchwepheshe. Ngithanda konke ngakho, ukudonsa phansi isifutho, ukuphakama, ingcindezi yami yamanzi inyuke kakhulu! Angikwazi ukukuguqula ngokuphelele lapho ngipheka ngoba ngingenza isimanga esikhulu! Futhi, banewaranti enwetshiwe efakazela ukuzethemba kwabo kumkhiqizo wabo kuphela.
Ukufakwa okulula, nemiyalo engenamsebenzi; ungahle ungathumeli imiyalo nhlobo. Ngalokho kushiwo isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu esihle ngentengo enhle kakhulu.
Lompompi wasekhishini kulula ukuyisebenzisa. Ikhwalithi nayo inhle kakhulu, kulula ukulawula ukugeleza kwamanzi.Kulula kakhulu ukuyisebenzisa, ngiyithanda kakhulu.
Ngisebenzise uplamba ukufaka ngoba ngingenawo amathuluzi akhethekile wokuqaqa umpompi wakudala. Ngiyakuthanda ukusebenza okubushelelezi nekhwalithi yale mpompi.
Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu ubuchwepheshe obuphakeme futhi busebenza kahle, amandla okwelula izintambo avele akwenze kube yigugu kakhulu futhi kube wusizo ekuhlanzeni. Izinto ezenziwe zenziwe ngekhwalithi ye-premium futhi angikwazi ukuthola amaphutha kule ompompi. Ngiyayithanda!
Thanda le ompompi. Ngiqala kabusha ikhishi lami futhi ompompi abasha bebephezulu ohlwini. Le ompompi ibonakele ukuthi iyilokho ebengikufuna.
Umpompi wami wamanje wawubukeka umdala futhi uphelelwe yisikhathi, kodwa bengingafuni ukuchitha ithani ukuwufaka esikhundleni. Ompompi nezinsizakusebenza futhi kubiza, kepha lokhu bekunamanani aphansi kakhulu futhi kubukeka KUNGCONO kangcono kunezinketho eziningi eziphakeme. Ukufaka kungithathe isikhashana, kepha kukonke, ngijabule kakhulu ngalo mkhiqizo.
Bekufanele ngenze imigqa yami kodwa endlini endala. Umkhiqizo ubungcono lapho ngicabanga. Kungcono-ke le engiyithengele enye isinki esitolo sehadiwe.
Imiyalo kungenzeka icace kancane kepha amanye amavidiyo we-youtube asizile. Ngangingenaso isipiliyoni sangaphambilini futhi ngakwazi ukuthola iso elimnyama nge-wrench kepha kubukeka kukuhle. Usebenzise izinyanga ezimbalwa futhi akunazinkinga.
Ngijabule kakhulu ngale mpompi! Kulula kakhulu futhi kuqondile ukufaka. Isebenza kahle futhi akukho lutho oluzizwa lushibhile. Kubukeka kukuhle futhi kusebenza ngokumangalisayo! Ncoma kakhulu!
Kuhle kakhulu futhi kulula ukuyifaka, ifana nombala, ifana nethayela lami ekhishini lami.
Kulula kakhulu ukufaka ngiyayithanda ukuthi inamapayipi angu-3/8 ngakho-ke akudingeki ukhathazeke ngokuthi izovimba nge-lime noma i-calcium njengoba kwenza izinto eziningi zokulondoloza amanzi.
Nginompompi wakudala wasekhishini, futhi ngimane ngiwuthathe indawo yawo, ngiyayithanda kakhulu le ompompi, kulula ukuyifaka ungazenzela wena futhi ube nenani elihle.
Isimanga esikhulu! Ngiyayithanda idizayini, ukubukeka nokuzizwa kwami ​​kusetshenziselwa ompompi. Isifutho esakhelwe ngaphakathi sihle !! Ngiphinde ngabona ukuthi ingcindezi yamanzi ingcono kakhulu kunompompi wami wangaphambilini okwaba isimanga esihle.
Ukufakwa kwakulula. Ngingayincoma le ompompi kunoma ngubani ocabanga ukuyithenga.
Ngitholile ompompi izinsuku ezimbalwa. Umyeni wami uyifake izolo. Ukufakwa okulula kakhulu.Kuyinto enhle.Sifake le ompompi kusinki yethu yasekhishini.akukho ukuvuza noma kulenga phansi. Siyakuthanda lokhu.
Umpompi omangalisayo wemali !! Azikho izinkinga zokufakwa kithi. Isebenza kahle futhi ilusizo kakhulu.
Imiyalo emincane yokuqinisekisa inqubo yokufaka kepha zonke izingxenye zixhunywe kahle kahle futhi yonke imisebenzi mihle kakhulu.
Ngathenga le ompompi cishe ezinyangeni eziyisithupha ezedlule futhi ngigculiseke kakhulu ukuthi isebenza kanjani futhi ibukeka iyinhle kakhulu
Ngabuyekeza ngaphambi kokuyithenga. Ulayini oshisayo mfushane kunalona wamanje enginawo. Akunankinga, sithole isandiso kwa-Ace. Kulula ukufaka esikhundleni. Kubukeka kukuhle, ukugeleza kunamandla. Ngingayincoma le ompompi.
Umkhiqizo omuhle wentengo. Umbhobho udonsela phansi kalula. Sasifakelwa amapayipi ngoba amapayipi ethu ayesondele kakhulu odongeni lwekhabethe.
Besingaqiniseki ekuqaleni njengoba besingakaze sizwe ngalo mkhiqizo kodwa sanquma ukuzama ngokususelwa kuzo zonke izibuyekezo ezinhle. Sijabule kakhulu ngaleli ompompi. Ikhwalithi inhle, ibukeka kahle, ihamba kahle, intengo enkulu nokupakisha okuhle. Sesinayo cishe inyanga manje futhi besingeke sijabule ngokwengeziwe.
Ngidinga ukushintsha ompompi wami wakudala wasekhishini futhi ngicabanga ukuthi lokhu kuyisinqumo esihle. Kuza namapuleti emigodi emi-3 kweyami endala. Kukhona ividiyo ekhasini le-wowow yokufundisa indlela yokufaka. Kuthatha kuphela imizuzu engu-15 ukuqedela ngokuphelele ukufaka. Ukugeleza kwamanzi kuyashelela futhi kunamandla impela.
Ngikhetha kakhulu, ngenza ucwaningo oluningi futhi ngivame ukufuna izinhlobo zamagama futhi angikaze ngibe ngaphansi komugqa, yingakho ngenze ucwaningo olunzulu ngaphambi kokufaka leli gama lomkhiqizo engingalazi ohlwini lwami olufushane lwemikhiqizo eyaziwayo idizayini efanayo ngaphezulu kokuphindwe kabili noma kathathu kwezindleko. Okunye ukukhathazeka okubili: 1. Ukubuyekezwa okumbalwa okushiwo ukudonswa phansi akuzange kuhlehle futhi kubuyele endaweni efanele, kwasala kulenga. Lokho empeleni kuyinkinga yokufaka. Kukhona isisindo esidinga ukulungiswa, okulula kakhulu, bese sisebenza ngokuphelele. 2. Umbala - izithombe zikukhombise ukuthi kufana nombala ompunga wensimbi ongagqwali, kodwa wenziwe nge-nickel enamabhulashi, engaba nombala ofudumele, onsundu engangikhathazekile ukuthi ngeke ifane nemishini yami ye-SS. Angikutholanga ukubuyekezwa okushiwo leso sici noma kule mibuzo, ngakho ngazibuza lo mbuzo futhi ngathola izimpendulo ezinhle ezingiqinisekisa ukuthi azinawo umbala onsundu futhi zizosebenza kahle ngezinto zokusebenza zensimbi engagqwali. Lokho kube yiseluleko esihle, ngiyabonga kulabo bantu abathathe isikhathi ukuphendula umbuzo wami, angizange ngidumale. Lo ngumkhiqizo wekhwalithi oqinile, idizayini enesici sokudonsela phansi nesifutho iyamangalisa, amasinki ami awakaze ahlanzeke kangako! Ukuphela kwento engingakwazi ukukhuluma nayo yimpilo ende ngoba sekuphele inyanga kuphela, kepha njengoba ompompi abaningi basekhishini, isetshenziswa njalo, futhi anginaso isizathu sokucabanga ukuthi ngeke ihlale ngokufana nemikhiqizo ebiza kakhulu. Inketho enhle, yenzele yona, yonga i- $, ngijabule ukuyincoma ngezinkanyezi ezi-5.
Ngemuva kokubuyekezwa kwami ​​kwasekuqaleni, insizakalo yamakhasimende yangithinta ukuze isize ekushintsheni isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu esingalungile yize besedlule ewindini le-WOWOW. Ngosizo lwabo ngikwazile ukulungisa ompompi kodwa okwamanje bazwakalisa ukuthunyelwa okushintshiwe noma kunjalo uma kungenzeka angikwazi ukulungisa eyokuqala. Inkinga bekuwukuthi indlela yokubamba yangaphakathi ibivumela isibambo ukuba sihambe siye kolunye uhlangothi ukulungisa ukushisa kodwa hhayi phezulu naphansi ukuvula ukugeleza kwamanzi. Kwakudingeka ukuthi ihlukaniswe futhi ihlaliswe kabusha ukuze isebenze ngokugcwele. Umpompi manje usebenza njengokulindelekile futhi ukubukeka yilokho kanye ebengikufuna. Izinkanyezi ezi-5 zesevisi yamakhasimende yale nkampani!
Okwangempela: Le bomba ilungile futhi intengo ibilungile, ngeshwa ayisebenzi. Awekho amanzi aphumayo. Isibambo sihamba siye ngapha nangapha ukushintsha phakathi kokushisayo / okubandayo kepha asihambi phezulu naphansi ukuvula ipompo. Ngibonile okunye ukuphawula nemibuzo maqondana namanzi ngakho ngicabanga ukuthi kungaba inkinga yomhlangano kwezinye izinto. Konke ukuxhumana bekuxhunywe kahle futhi ama-valve womugqa wokuhlinzeka avuliwe. Njengobufakazi obengeziwe bokuthi amanzi ayekhona futhi ayatholakala ngabona ukuthi amanzi aconsela ngaphandle kwamapayipi ngemuva kokuthi nginqamula ompompi. Njengoba ngiyithenge ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ngokulungiswa kwegumbi lami lokuwasha okusanda kuqedwa ngidumele kakhulu ukuthi angikwazi ukusebenzisa le ompompi enhle futhi manje iwindi lokubuyisa seliphelile ngakho-ke kubukeka sengathi ngibambekile kulo.
Umpompi wethu wasekhishini usanda kushona futhi si-ode le mpompi ukuba ithathe indawo yayo, sijabule ngokuthi sizoyithola ngokushesha okukhulu futhi sikwazi ukuyifaka kule mpelasonto ukuze sikwazi ukuqhubeka nokusebenzisa usinki wethu wasekhishini. Kodwa-ke, lapho sivula ibhokisi, sabona ngokushesha ukuklwebheka okukhulu ekugcineni engxenyeni ende yompompi. Impela lolu wudaba lwe-QC njengoba umhuzuko uzogcina ngokugqwala, ingasaphathwa eyokuthi kubukeka kukubi impela. Sikhungathekile ngokweqile ngoba manje asisakwazi ukusebenzisa isinki yethu yasekhishini size sithole enye. Lokhu ukuphazamiseka okukhulu. Angikholwa ukuthi into enjengale ayizange ibanjwe ngesikhathi sokuhlolwa kwekhwalithi ngaphambi kokuthi umkhiqizo uhlanganiswe futhi uthunyelwe! Ngikhungathekile kakhulu njengoba besikulangazelele ngempela ukufaka le ompompi basekhishini futhi isinki yethu iphinde isebenze futhi!
QAPHELA: Ngivuselele ukubuyekeza kwethu kusuka ezinkanyezini ezi-1 kuye kwezingu-5 ngenxa yesevisi enhle yamakhasimende esiyitholile ngemuva kokuthumela ukubuyekeza kwethu kokuqala. I-WOWOW cishe inesevisi yamakhasimende enhle kakhulu esake sayithola kunoma iyiphi inkampani. Basithumelele ipompo engenamaphutha nge-courier ye-DHL evela eChina eyafika ezinsukwini ezimbalwa kanye nepuleti elincane, nalo elivela eChina nge-DHL. Uma sesifakile ompompi sayithanda kakhulu, ibukeka kahle futhi isebenza kahle. Nakulokhu futhi, i-WOWOW yadlulela ngaphesheya nangaphezulu ukwenza lesi simo sisifanele futhi sahlabeka umxhwele kakhulu ngenkonzo yabo yamakhasimende.
Le ompompi ithatha indawo yento yokubamba eyodwa engu- “brand brand” eneminyaka engu-15 enekhanda lokudonsa. Le ompompi ibiqala ukuvuza emihlanganweni yama-valve emzimbeni ompompi futhi bengingafuni ukuzama ukuyilungisa. Kusetshenziswe amahora ama-2.5 - 3 ukukhipha iyunithi yakudala… ukugqwala nemicu ehlutshiwe kwenza le ngxenye yomsebenzi icishe ihlehliswe. Lokho kanye nokwakheka okungalungile kwemishini yakudala kwenzelwe igazi eliningi, umjuluko, nezinyembezi kimi.
Ngakolunye uhlangothi, ipayipi elisha lafakwa futhi lahlolwa cishe imizuzu engama-35. Ukuxhumeka okuhlanganisiwe okubili kokufakwayo okushisayo nokubandayo nokuxhumeka okukodwa okukodwa okukhulu kompompi wokucwilisa isikhombimsebenzisi… i-voila, yenziwe.
Qiniseka ukuthi ungeze itheyiphu yeteyifoni yeTeflon ekuxhumaneni kokufaka okushisayo / okubandayo; akufakiwe emaphaketheni. Imiyalo ibhalwe ngohlobo lwalokho okubonakala njenge-Outer Mongolian ehunyushelwe esiNgisini okungadala ukuncibilika kobuchopho kunoma yimuphi uthisha wesikole sohlelo lolimi, okusho ukuthi "Ukuqedela ukufakwa nokuhlola ukuvuza noma cha." Ngokujabulisayo imifanekiso ihle kakhulu okwenza izingxenye zomlomo zingadingeki… kepha ziyahlekisa.
Konke kwafakwa ekupakisheni (ngaphandle kwetheyiphu yokufaka uphawu); ipuleti le-escutcheon, ama-gaskets okusindisa, i-allen wrench, kanye ne-3/8 kuya ku-1/2 adapters yokuxhuma okushisayo / okubandayo (uma kudingeka)
Ngemuva kwakho konke okushiwoyo umpompi omusha usebenza kakhulu futhi ubukeka kahle kakhulu kunendala. Ngingayincoma kakhulu futhi ngingeze ukuthi intengo ibicishe ibe ngama- $ 75 - $ 100 ngaphansi kwamagama afanayo wegama lomkhiqizo. Uma lokhu kuhlala isikhathi eside kunalokho obekukufakile, ngizojabula kakhulu.
Ngihlabeke umxhwele kakhulu ngompompi wami omusha! Ngangiswele kakhulu futhi ngangingazi lutho ngompompi, amagama ambalwa kuphela emikhiqizo. Kucwaningo lwami ngithole i-WOWOW futhi konke ukubuyekeza bekuhlukile. Ngangazi nje ukuthi babengama- $ 100 ngaphansi kunamagama aziwayo ngakho-ke bekufanele ngizame. Ukufakwa kwakulula futhi asikho isidingo sokubiza uchwepheshe. Ngithanda konke ngakho, ukudonsa phansi isifutho, ukuphakama, KANYE nengcindezi yami yamanzi yanda kakhulu! Angikwazi ukukuguqula ngokuphelele lapho ngipheka ngoba ngingenza isimanga esikhulu! Ake ngikutshele lapho iHome Depot ithengiswa kakhulu ngemuva kwezinsuku ezi-4 ngifakile ompompi wami omusha angizange ngilingwe nokufuna. Futhi, banewaranti enwetshiwe efakazela ukuzethemba kwabo kumkhiqizo wabo kuphela.